मारिया क्यारे: धुलोबाट उठेको धुन
एक क्रूर बाल्यकाल। एक दर्दनाक विवाह। दशर्कौंदेखिको जातीय विभेद। यी सबै सकसलाई चिरेर एक गायिका अहिले संगीत क्षेत्रको चुचुरोमा पुगेकी छन्। आफूलाई दुःख दिने सबैलाई उनी एकमुष्ट ‘श्रद्धाञ्जलि’ भनिदिन्छिन् र आत्मविश्वासको टेकोमा स्वयम्लाई अडाउँछिन्।
यो कुनै पानी परिरहेको बिहीबारको मध्याह्न थियो, मारिया क्यारे उनको घर लसएन्जेलसबाट मसँग कुरा गरिरहेकी थिइन्। मेरो ल्यापटपबाट उनको आवाज गुन्जिरहेको थियो। के यो साँच्चै एउटा जिन्दगी हो या यो कुनै स्वैर कल्पना? (मीठो मीठो कल्पना...)
‘‘हेलो, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, यो थोरै अस्वाभाविक भयो,’’ गम्भीर आवाजमा क्यारेले भनिन्। तिमी मलाई मारिया भनिरहेका छौ।
हामी भिडियो च्याटमा कुरा गरिरहेका थियौं, तर क्यारेकै अनुरोधमा ‘भिडियो च्याट अन’ नगरिकनै, त्यसैले यो विशुद्ध गफ हुन पुग्यो। उनको गायन क्षमता ‘हाई नोट्स’मा छ, उनी आफूलाई सधैं उच्च पुरुष आवाज (अल्टो)का रूपमा परिभाषित गर्न रुचाउँछिन्। उनको आवाज आज मीठो, तर निकै भारी सुनिएको छ। के उनी ठीक छिन्?
उनले भनिन्, ‘‘अहिले बिहानको ६ बजेको छ। म चम्किलो उज्यालोमा बिउँझन्छु र यो मलाई खुबै मन पर्छ।’’
मैले भनेँ– तपाईंलाई अन्तवार्ताका लागि चाँडो उठाएँ मैले, म माफी चाहन्छु।
‘‘ठीकै छ नि प्रिय, तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ भने बिहान ६ बजे कुराकानी नगरौं। तर यो तपाईं बोलिरहेको होइन,’’ उनले भनिन्।
हामीले कुराकानी गर्ने भनेको समय धेरै पटक परिवर्तन भइसकेको थियो, क्यारेको व्यस्त तालिकाका कारण। मलाई त कुराकानी हुन सक्छ भन्नेमै दोधार थियो। तर अन्त्यमा समय तोकियो, उनैले रोजेको समय– बिहानको ६ बजे। उनी आफूलाई ‘निशाचर व्यक्ति’ भन्छिन्, त्यसैले बिहानको ६ पनि उनका लागि साँझको ६ भइदिन्छ। त्यसको कारण खोज्नु आफैंमा जटिल कार्य हो। क्यारे एक साहसी व्यक्ति हुन्, उनी निशाचर पनि होइनन्। त्यसैले अहिले बिहानकै ६ बजेको छ, केवल ६।
‘‘खासगरी म रातभरि काम गरिरहेकी हुन्छु, अहिलेसम्म पनि। त्यसपछि म केहीबेर सुत्न चाहन्छु। तर मैले ओपराहसँगको अन्तर्वार्ता हेरेकी थिएँ। सब ठीक छ, मैले नसुतेको त केवल एक रात त भएको छ, म यहीँ त छु नि,’’ उनी भन्छिन्।
उनी सबैभन्दा चर्चित गायिका र गीतकार त्यसै भएको होइन। उनको हालसम्म दुई करोडभन्दा बढी रेकर्ड बिक्री भएको छ। यस्तो रेकर्ड अहिलेसम्म अमेरिकामा बिटल्सको थियो।
५० वर्षीया क्यारे उनका नौ वर्षका जुम्ल्याहासँग लकडाउनमा बसिरहेकी थिइन्। एकको नाम मुनरो (क्यारेको आदर्श म्यारिलिन मुनरो) र अर्को मोरोक्कन (आशिंक नाम उनको मन पर्ने कोठाको)। ‘‘मोरोक्कन रुममा मैले थुप्रै सिर्जनात्मक चमत्कार गर्न सकेकी छु। निक, जुम्ल्याहाका पिता र उनले मलाई क्यान्डी ब्लिङ (विवाहको औंठी) दिएका थिए,’’ उनी भन्छिन्।
उनले क्यान्डी ब्लिङमाथि एउटा गीत नै लेखिन्। दुर्भाग्य, यी दुईको सहयात्रा (विवाह) लामो समय टिकेन। यिनले २०१६ मा पारपाचुके गरे।
‘‘इमानदारीका साथ भन्नुपर्दा, मलाई बाहिरका कसैको पनि याद आउँदैन। त्यसैले यो लकडाउनले मलाई कुनै फरक पारेको छैन,’’ उनले हाँस्दै भनिन्, ‘‘तर लकडाउनले मेरा बच्चालाई भने असर पारेको छ। यिनीहरु वर्षमा तीन पटक डिज्नी वर्ल्ड पुग्थे, अहिले रोकिएका छन्।’’
उनको बाल्यकाल उपेक्षा र हिंसाबाट घेरिएको थियो, आफ्नै दाइदिदीबाटै पनि। त्यसबखत उनी ६ वर्षकी थिइन्, उनका दाजुले आमालाई बेहोस हुने गरी कुट्यो। जब उनी १२ वर्षकी भइन्, उनकी दिदीले उनलाई आगुऔषध खुवाइदिइन् र डर लाग्दा पुरुषहरुसँग छोडिदिइन्।
क्यारे आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तक प्रवर्द्धनात्मक यात्राको योजना बनाइरहेकी छन्। मारिया क्यारे त्यही नाम हो, जसले आफ्नो बाटो आफैं खोज्यो। उनीसँग तर्क गर्ने ताकत कसको? उनीसँगको कुराकानीको यो अन्तिम चरण थियो।
‘‘अन्तर्वार्ता गर्नु कुनै अपराध होइन, यसलाई रक्षात्मक पार्नु पर्दैन। तर मुख्य बिन्दु के हो? म त्यसभन्दा बढी कुरा केही भन्न चाहन्नँ र राम्ररी भन्न पनि सक्दिनँ, जुन मैले पुस्तकमा लेखिसकेकी छु। पृष्ठ २९ मा त्यो कुरा छ। तपाईंले बुझ्नु भयो नै होला, म के भन्न खोजिरहेकी छु भनेर,’’ क्यारे भन्छिन्, ‘‘मलाई उनका बारेमा थाहा छैन (दुई दशकअघि ख्यातिप्राप्त गायिका, अभिनेत्री जेनिफर लोपेजको प्रसंग उठ्दा)।’’ त्यो सन्दर्भ अहिले पनि इन्टरनेटमा खुबै खोजिन्छ।
उनीसँग लोपेजबारे कुरा सोधिन्छ अहिले पनि। तर उनले आफ्नो संस्मरणमा त्यसबारे केही उल्लेख गरेकी छैनन्। प्रश्न उठ्ने नै भयो, के उनलाई साँच्चै लोपेजबारे केही थाहा छैन!
कुराकानीमा कहिले अलिकति ‘पज’ त कहिले गज्जबको हाँसो। लोपेजबारे उनले केही नसुनेको मात्र होइन, उनी त्यसबारे कुनै प्रश्न सुन्न पनि रुचाउँदिनन् सायद।
‘‘म भन्न सक्दिनँ कि कोही म कहाँबाट आएँ भन्ने जान्न चाहन्छन्! म मेरो अतीतबारे चुपचाप थिएँ। अहिले त भन्न थालेकी छु। म एक अफ्रिकी–अमेरिकी पिता र गोरी माताबाट जन्मेकी हुँ। परिवारमा सबैभन्दा सानी म, जब म तीन वर्षकी थिएँ तब मेरा मातापिता अलग भए,’’ उनी भन्छिन्।
घरमा जो थिए, ती क्यारेका लागि खतरा थिए। असुरक्षा हुँदाहुँदै पनि उनी त्यहीँ बसिरहेकी थिइन्। क्यारेलाई क्रिसमस चाड मन पर्छ, किनकि उनको बाल्यकालको क्रिसमस पीडादायी थियो। उनले क्रिसमसबारे गीत नै लेखेकी छन्– अल आई वान्ट फर क्रिसमस फर यु। उनले आफ्नो संस्मरणमा लेखेकी छन्, ‘‘गीत लेख्दा मलाई यति आनन्द आयो कि, त्यसले मलाई क्रिसमसका बेला एउटी स्वतन्त्र केटीको महसुस गरायो।’’
उनको पुस्तकमा एउटा निकै दर्दनाक क्षण २००१ मा आएको उल्लेख छ। त्यसबखत एउटा समाचारले उनलाई भावनात्मक रुपमा घाइते बनाइदिएको थियो। थुप्रै मानिसले उनलाई त्यसबेला पीडा दिएका थिए, आफ्नी आमा नै पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएजस्तो गरिरहेकी थिइन्।
हाम्रो कुुराकानी केहीबेर रोकिन्छ। उनी भन्छिन्, ‘‘ती मेरा हृदयका शब्द हुन्, कृपया पृष्ठ २९ पढ्नुस्।’’
क्यारे आफ्नो संस्मरणमा असाधारण रुपमा इमानदार देखिएकी छन्। यद्यपि, त्यसमा उनका पूर्वप्रेमी अर्बपति जेम्स पेकर, बेसबल स्टार डेरेक जेटरको कतै उल्लेख छैन।
सोनी म्युजिकका तत्कालीन प्रमुख टोमी मोटोलाले क्यारेको खोज गरेको कुरा एउटा किंवदन्तीजस्तै लाग्छ। तत्कालीन अज्ञात तर महत्वाकांक्षी गायिकले १९८८मा एक पार्टीमा मोटोलालाई आफ्नो एउटा गीतको टेप दिएकी थिइन्। पछि तिनै मोटोलासँग उनको विवाह भयो।
त्यसबेला क्यारे २३ वर्षकी थिइन्, मोटोला ४४ वर्षका। मोटोलाको जीवन र उनको अवस्थामा आकाशपातालको फरक थियो। उनी कमजोर आर्थिक अवस्थामा थिइन् भने मोटोला अधिक धनी व्यक्ति। त्यसरी अमिल्दो जीवन जिउन पनि उनलाई खासै कठिन परेन। तथापि, मोटोलासँग उनको जीवन सहज भने भएन। उनी नियन्त्रित जीवन बाँच्न बाध्य भइन्, उनलाई घरमा कैदीजसरी बस्नुपर्‍यो। अन्ततः १९९७ मा उनीहरुको सम्बन्ध विस्फोट भयो।
उनका सदाबहार गीतहरुमा ‘आई विल बी देयर, इमोसन्स, वान स्विट डे’लगायत पर्छन्।
मैले उनलाई सोधेँ– लेख्ने क्रममा पुराना पीडा सम्झनुपर्दा खुबै गाह्रो होला हैन?
‘‘हो, निकै दर्दनाक अवस्था थियो। जुन अवस्थाबाट म गुज्रिएकी थिएँ, त्यसलाई सम्झँदा निकै कठिन लाग्छ,’’ उनले मोटो आवाज निकालेर हाँस्दै भनिन्, ‘‘म त्यो भावनात्मक चरम शोषणको अवस्थाबाट मुक्त हुन नसकेको भए, के हुन्थ्यो भन्न सक्दिनँ।’’
‘‘ती कुनै अर्थपूर्ण कुरा थिए भने म किताबमा राख्थेँ। अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण सन्दर्भ त मैले किताबमा राखेकै छु,’’ उनी भन्छिन्।
तर, तपाईं र पेकरको सम्बन्ध त थियो नि? मैले प्रश्न गरेँ।
‘‘म इमानदार भएर भन्छु– उनीसँग मेरो कुनै शारीरिक सम्बन्ध थिएन,’’ उनी स्पष्टीकरण दिन्छिन्।
‘‘अहँ म रिसाउँदिनँ। (आमाचकारी गाली),’’ उनी मस्तसँग हाँस्छिन्, ‘‘इमानदारी! हे भगवान्, कोही मलाई देवी भनिरहेको छ। मलाई रुन मन लागेको छ। कुनै शब्दले बोलाउँदा वा उपमा दिँदा आनन्द आउँछ, तर देवी? बरु मलाई कुकुर्नी भनेको भए हुन्थ्यो।’’
क्यारेको आवाजले नै उनलाई संसारमा प्रख्यात बनाएको हो।
बिहानको ७ बज्नै लागेको थियो। उनी पूर्णतः जागिसकेकी थिइन्।
मैले सोधेँ– यो कुराकानीले तपाईंलाई आनन्द दियो मारिया?
‘‘अहँ दिएन, म यसलाई घृणा गर्छु,’’ यति भनेर उनी मरीमरी हाँस्न थालिन्, ‘‘सरी प्रिय, यो बहुतै रमाइलो भयो।’’
मैले जीवनमा थुप्रै ख्यातिप्राप्त पात्रको अन्तर्वार्ता गरेको छु। तर, क्यारेसँगको कुराकानीले मलाई उनको निकै नजिक लगेको पाएको छु। कतिपय आधुनिक सेलेब्रिटीसँग कुरा गर्दा दिक्क लाग्छ। तर, क्यारे फरकखालकी छन्। मुख्य कुरो उनी इमानदार छिन् र प्रश्नको जवाफ इमानदारीका साथ दिन्छिन्।
उनलाई कतिपयले ‘देवी’को उपमा पनि दिएका छन्। यो उपमा उनको आवाज र संघर्षले दिलाएको हो। म अन्त्यमा उनलाई त्यही प्रश्न सोध्छु– उनी कहाँबाट आएकी हुन्? के उनी यसमा रिसाउँछिन्?
(दि गार्जियनबाट अनुदित तथा सम्पादित)
प्रकाशित: बुधबार, असोज २१, २०७७ ०७:१२
आफूलाई दुःख दिने सबैलाई उनी एकमुष्ट ‘श्रद्धाञ्जलि’ भनिदिन्छिन् र आत्मविश्वासको टेकोमा स्वयम्लाई अडाउँछिन्।
हामीले कुराकानी गर्ने भनेको समय धेरै पटक परिवर्तन भइसकेको थियो, क्यारेको व्यस्त तालिकाका कारण। मलाई त कुराकानी हुन सक्छ भन्नेमै दोधार थियो।
मलाई रुन मन लागेको छ। कुनै शब्दले बोलाउँदा वा उपमा दिँदा आनन्द आउँछ, तर देवी? बरु मलाई कुकुर्नी भनेको भए हुन्थ्यो।